Salman Khan Lamaantiisa Iulia Vantur Hindiya ayay dib … - Hablaha Media Network
HMN:-Gabadha lagu xanto inay saaxiib la tahay Mega Star Salman Khan laguna magacaabo Iulia Vantur ayaa la sheegay inay dib ugu soo laaban doonto gudaha Hindiya.
Dhowr todobaad ka hor ayay Iulia Vantur dib ugu laabatay dalka Romania madaama waqti ahaan ka dhici rabay dal ku galka ay Hindiya ku joogtay.
Waxaa dhawaan la baahiyay in Iulia Vantur iyo Salman Khan isku dhaceen sidoo kalena xidigaan dib ugu soo laaban doonin gudaha Hindiya.
Laakiin gabadhaan Model-ka ka tirsan ayaa la sheegay inay Mumbai dib ugu soo laaban doonto sidoo kalena waqti la qaadan doonto Salman Khan oo ay saaxiib dhow yihiin.
Waxaa la sheegay in Visa-ha loo cusbooneysiiyay Iulia Vantur dhawaana dib ugu soo laaban doonto gudaha Hindiya waxayna ka mid tahay shaqsiyaadka xogteeda saxaafada u baadi goobto madaama ay xiriir dhow la leedahay jilaaga xiligaan ugu shacbiyada balaaran gudaha Hindiya.